Tatitra fampisehoana secta fizahan-tany any Kenya 2019
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Tatitra fampisehoana secta fizahan-tany any Kenya 2019
Janoary 10, 2020
Fialan-tsasatra any Kenya! Ity dia toerana tena ankafizin'ny mpandeha amerikana sy orinasa lehibe ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany any Kenya. Mijoro ho vavolombelona amin'izany ny tatitra momba ny fizahantany secteur fizahan-tany any Kenya ho an'ny taona 2019. Navoakan'ny Birao Nasionalin'ny statistika fotsiny ny tatitra.
Ilay lehilahy homena mari-bola mahomby 1.6 miliara Dolara Afrika Najib Balala, Sekreteran'ny fizahantany any Kenya
Tian'ireo Amerikanina ny mandeha any Kenya satria i Etazonia no mijanona ho firenena loharanom-pizahantany tandrefana indrindra ho an'ity Firenena Afrika Atsinanana ity, arahin'i UK, India, Sina, Alemana, France, ary Italia.
Tamin'ny taona 2019, mpitsidika iraisam-pirenena 2,048,334 1,423.971 128,222 no tonga tany Kenya, 29,462 no tonga tany Nairobi, ary 467,179 XNUMX tao Mombasa. XNUMX ny mpitsidika tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina hafa ary XNUMX XNUMX ny mpitsidika tonga an-tanety.
Tamin'ny taona 2018, totalin'ny fahatongavana dia voarakitra tamin'ny 2,025,206 - midika izany fa nitombo 1.167% i Kenya tamin'ny taona 2019
Ny fidirana amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Jomo Kenyatta sy ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Moi dia nitombo 6.07% ary 8.56% raha oharina amin'ny fitomboana 1.167%.
Ireo teboka fidirana hafa dia nanamarika ny fihemorana indrindra ny fari-tany dia nisy fihenan'ny fahatongavan -12.69%.
Ity dia famantarana iray fa ny fifandraisana amin'ny rivotra dia hitohy ho mpamily lehibe amin'ny fitomboan'ny fahatongavan'ireo tonga iraisam-pirenena any Kenya
Ny tsenan'ny mpitsidika amin'izao fotoana izao dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 20
Alemanina: 73,1509 XNUMX
Afrika atsimo: 46,926
Espana: 26,398 XNUMX
Sodana atsimo: 24,646
Ny taonan'ny mpitsidika:
65 ary mihoatra ny 4%
63.15% n'ny mpitsidika rehetra no nanao dia tamin'ny andro fialantsasatra, 13.5% tamin'ny asa aman-draharaha, 10.5% nitsidika namana sy fianakaviana,
Ny fidiram-bola sy ny fizahan-tany any Kenya amin'ny taona 2019 dia USD 1,610,342,854 mahasalama
4,955,800 alina fandriana amidy. Tamin'ny taona 2018 dia nahitana 4,489,000 ny statistika.
Ahoana no nampiroboroboana ny Destination Kenya?
Fanentanana ho an'ny mpanjifa Global Online ao amin'ny Google,
Sampana fitsangatsanganana an-tserasera toa ny Travel Zoo
Aljazeera sy CNN Online
Fanentanana momba ny dokambarotra ho an'ny mpanjifa nomerika mitohy ao amin'ny Expedia sy Tripadvisor ary amin'ny media sosialy sy karoka Google.
Fanentanana iraisana miaraka amin'ny fikambanam-barotra toy ny APTA, SATOA, ATTA, amin'ny tsena lehibe.
Fitsangatsanganana fivarotana fizahan-tany any UK, India, USA ary Shina mampiseho ny traikefa sy serivisin'ireo mpilalao sehatra tsy miankina
Fampirantiana varotra eran'izao tontolo izao ahitana ny MKTE any Nairobi, ITB Berlin, ITB Asia any Singapore, WTM London, WTM Africa any Cape Town, OTM any India, ary USTOA, Etazonia.
• Fanentanana an-toerana mitondra ny lohateny hoe "TembeaKenyaNaMimi" amin'ny alàlan'ny fahitalavitra, sehatra nomerika ary radio.
• Hetsika famelabelarana kendrena amin'ny hetsika PR manerantany hitrandrahana zava-tsoa manodidina ny toerana haleha ohatra ny Kenya Golf Open, NY Marathon ary Ineos 1:59 Challenge.
• Marika nohavaozina - "EmbraceMoreMagic"
Ny fivoarana tsara izay nanampy tamin'ny fitomboan'ny fahatongavana dia tafiditra ao amin'ny 2019:
• Ny vokatra taorian'ny nanohizana ny sidina teo anelanelan'i Paris sy Nairobi tamin'ny taona 2018. Ny Air France tamin'ny volana martsa 2019 dia nampitombo ny faharetan'ny sidina avy amin'ny telo ka hatramin'ny dimy isan-kerinandro. Ny tsena frantsay koa dia nahita fitomboana satria nihena ny hafa toa an'i UK.
• Nanomboka sidina mivantana avy any Doha mankany Mombasa ny Qatar Airways tamin'ny Desambra 2018. Heverina fa hanompo tsena isan-karazany izany, i Doha no ivon-toerana ifandraisana lehibe.
• Ny Etiopiana Airlines dia nampitombo ny fahita matetika amin'ny sidina mankany Mombasa tamin'ny sidina iray ka hatramin'ny roa isan'andro mandritra ny taona.
• Nampiakatra ny sidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Moi ny TUI sy ny Neos izay vao mainka nampitombo ny fahatongavan'izy ireo hatrany Mombasa
• Ny fanombohan'ny sidina mivantana eo anelanelan'ny Nairobi sy New York avy amin'ny Kenya Airways tamin'ny Oktobra 2018 dia nanampy tamin'ny fitomboan'ny tsena amerikana maharitra.
Ny firenena dia niaina fitoniana ara-politika nitohy nandritra ny taona. Nahazo fitoniana ny tontolon'ny fizahan-tany ary nanampy tamin'ny fitomboana voarakitra an-tsoratra.
Ny filaminana dia nijanona ho marin-toerana tamin'ny taona niaraka tamin'ny fampiasam-bola maharitra nataon'ny governemanta.
Nisy mpampihorohoro iray fanafihana tao amin'ny hotely Dusit2 any Nairobi tamin'ny voalohan'ny taona izay nisy fiantraikany mivantana tamin'ny fizahan-tany.
Ny Banky Iraisam-pirenena dia nanome isa an'i Kenya tamin'ny tatitra momba ny Ease of Doing Business izay naneho fa tamin'ny taona 2019, Kenya dia nanatsara toerana dimy ho 56 manerantany amin'ny fahasarotan'ireo mpampiasa vola hatramin'ny 61 tamin'ny 2018.
Izany dia nifamatotra tamin'ny hafa, ny automatisation an'ny rafitra izay nanamora ny fanombohana orinasa any Kenya ary fanoloran-tenan'ny governemanta hanohy handray rafitra mifehy tsara sy hanatsara ny tontolon'ny orinasa.
Na izany aza, ny fitomboana voarakitra dia miadana kokoa noho ny kendrena ary izany dia azo avy amin'ny antony lehibe anisan'izany:
Fanafihan'ny mpampihorohoro Dusit d2 tamin'ny Janoary 2019 ary namerina ny fampandrenesana fitsangatsanganana sasany izay nanesorana ireo mpanolotsaina tamin'ny taona 2018.
• Ny taona ara-bola 2018/19 sy 2019/20 dia nahitana fihenan'ny loharanom-bola ho an'ny fampandrosoana fizahantany sy marketing.
• Mampidina ny fitomboana amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny. UNWTO dia nitatitra fa ny fizahantany any Sub-Sahara Africa amin'ny ankapobeny dia nitombo hatramin'ny 1% hatramin'ny septambra tamin'io taona io ary manerantany, ny tahan'ny fitomboana dia nihena hatramin'ny 6% tamin'ny taona 2018 ka hatramin'ny 4%.
Tondro iraisam-pirenena: ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena dia nitombo 4% tamin'ny Janoary-septambra 2019 raha oharina amin'ny fitomboana 6% voarakitra tamin'ny taona 2018, izay mifanaraka amin'ny salanisa 4% isan-taona tao anatin'ny folo taona lasa (2008-2018).
Afrika Avaratra dia nitombo 10% raha i Afrika Atsimon'i Sahara kosa nitombo 1% izay ampitahaina amin'ny fitomboan'ny toerana any Kenya. (UNWTO)
Ireo mpitatitra eoropeana dia naneho fiovana mahery vaika tamin'ny taona 2019 natosiky ny famokarana vola be avy amin'ny hetsika fiasa. Any Afrika sy Afovoany
Atsinanana, ny fivezivezena amin'ny mpandeha dia nitombo 9.9% isan-taona. Ny amerikana dia nandrakitra ny fihenan'ny 2.4% ny volan'ny mpandeha an'habakabaka noho ny fitomboan'ny tsy fahazoana antoka eo amin'ny sehatra ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ara-politika any amin'ireo toekarena manan-danja ao amin'ny faritra. (Iată)
Araka ny lazain'ny UNWTO Tourism Barometra, ny angona notaterin'ny toerana 127 maneran-tany ho an'ny volana Janoary- septambra 2019 dia manondro ny fitomboan'ny tapakilan'ny fizahan-tany iraisam-pirenena manerana ny faritra maro. 78% (toerana 99) no nahita fitomboan'ny vola miditra amin'ny fizahantany iraisam-pirenena raha oharina tamin'ny vanim-potoana tamin'ny taon-dasa, raha 22% kosa no niaina fihenana
Ny Travel Independent tsy miankina dia mitentina 36.1% amin'ireo mpitsidika iraisam-pirenena any Kenya. Mahazo laza izy noho ny:
Fahafahana manokana mifanohitra amin'ny '' voafatotra '' amina vondrona namana, fianakaviana na mpiara-miasa.
Fivoarana manokana avy amin'ny fiainana traikefa nahafinaritra.
Te hampitombo ny fotoanako.
Fahafahana mihaona amin'ny olom-baovao ary matetika mahazo namana.
Ny sasany dia tanora tokan-tena mitady hetsika ara-tsosialy na mitady vady.
• Ny zokiolona sasany maty vady dia mampiasa ny trano fandraisam-bahiny maharitra na fitsangantsanganana an-dranomasina mandritra ny fotoana maharitra ho toy ny safidy manara-penitra amin'ny toeram-pitsaboana zokiolona mahazatra.
Ireo mpamatsy tolotra fizahantany dia tokony hampitombo an'io tombony io amin'ny:
• Manolotra fonosana toy ny fitsangatsanganana manokana ataon'ny tena manokana
• Fiantohana ny filaminana, fahatokisana ary fahatokisana ny toerana.
Sarobidy ho an'ny vola
Izany dia atosiky ny anton-javatra isan-karazany ao anatin'izany:
• Tolotra farany amin'ny Internet.
• Fitaovana fampitahana vidiana isan-karazany eo am-pelatanan'ny mpandeha.
• Mamaky ny hevitry ny vahiny teo aloha an-tserasera.
Niteraka karazana mpandeha be loatra izany. Misy ny fahatsapana bebe kokoa amin'ny sanda ho an'ny vola sy ny isa ho an'ny toeran-kaleha.
Fironana amin'ny taona 2020 sy ny sisa
27% amin'ireo mpanao fialantsasatra no mitady hitsidika toeran-tany / firenena vaovao ary efa ho ny ampahatelony (32%) no manantena ny hitsidika toeram-pivarotana na tanàna iray izay mitady fikatsahana bebe kokoa ”(ABTA).
Gastronomy dia manjary lasa ivon'ny traikefan'ny mpizahatany raha oharina amin'ny fanandramana mpanohana. Ilaina ny fanavaozana ny gastrolojia, manolora sakafo ara-organika sy manokana ary mitandrema amin'ny fahadiovana avo lenta
Ny mpizahatany dia maniry ny fahafaha-mamindra toerana ahafahan'izy ireo mamandrika vokatra raha mbola eo am-pahatongavana no mifanohitra amin'ny fonosana efa voafaritra mialoha. Manomboka amin'ny fankafizana nahandro ao an-toerana ka hatramin'ny fankalazana ireo fety sy fialantsasatra isam-paritra, ny traikefa eo an-toerana dia natao ho lasa fironana mpizaha tany be mpijery. Ny traikefa akaiky kokoa dia azo ampifanarahana amin'ny faniriana sy andrasan'ny mpanjifa, dia azo inoana kokoa fa hiverina izy ireo ary hampiasa serivisy mitovy.
Fahafahana amin'ny alàlan'ny teknolojia
Ny fampidirana ireo olona manana fahasembanana ara-batana sy ara-tsaina Ny fizahantany azo idirana dia mijery mihoatra ny isan'ny olona manana fahasembanana ara-batana sy ara-tsaina, mba hahitana ireo rehetra manana filàna mivezivezy - ao anatin'izany ireo be taona sy zazakely manerana ny androm-piainan'ny olombelona.
Fizahan-tany azo idirana Ny lalana mankany amin'ny fisian'ny omnichannel dia mitarika ireo influencers avy amin'ny media sosialy hiditra amin'ny habaky ny mpizahatany, mampiasa ny vondrom-piarahamonin'izy ireo mba hanao fitsangatsanganana izay voatokana sy manokana.
Ohatra amin'izany ny fampiharana Instagramonly antsoina hoe Six Travel, ahafahanao mamandrika trano fandraisam-bahiny mivantana amin'ny Instagram avy amin'ny tantaran'ny influencer na amin'ny alàlan'ny rohy iray amin'ny bio.
Tatitry ny fampisehoana secta fizahan-tany any Kenya - 2019 Tsindrio raha hampidina
Kenya dia firenena any Afrika Atsinanana miaraka amorontsiraka amin'ny Ranomasimbe Indianina. Izy io dia misy savannah, Lakelands, ilay lohasaha Great Rift Valley ary tendrombohitra avo. Izy io koa dia fonenan'ny bibidia toy ny liona, elefanta ary rhino. Avy any Nairobi, renivohitra, ny safaris dia mitsidika ny Maasai Mara Reserve, fantatra amin'ny fifindra-monina wildebeest fanao isan-taona, ary ny Valan-javaboary Amboseli, manome ny fomba fijerin'ny tendrombohitra 5,895m an'i Tanzania. Kilimanjaro.
Ny Hon. Najib Balala dia mpikambana ao amin'ny Komity mpanolotsaina momba ny fizahan-tany any Afrika
Sekretera misahana ny fizahan-tany any Kenya, Najib Balala, CEO JB Doris Woerfel, Cuthbert Ncube, filohan'ny holafitry ny fizahan-tany afrikanina